यूएइमा भएको घट्नाको सत्यतथ्य- पीडित, मुम्चे राई – Sanghiya Online
सङ्घिय समाज यूएइले पार्टिएकिकरण दुइ वर्ष पुरा भएको अवसरमा हिजो अायोजना गरेको सास्कृति कार्यक्रममा भएको घटना प्रति गम्भिर रूपमा सरोकार राख्दै विश्वभरी छरिएर रहनु भएका मेरा शुभचिन्तकहरूले म प्रतिको शुभेक्ष सङगै सामाजिक सन्जालहरूमा विभिन्न पोस्ट र कमेन्टसहरू गरि मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना सहित यस घटनाको घोर भत्सर्ना गरिदिनु भएको मा सबैमा हार्दिक अाभार ब्याक्त गर्न चाहान्छु । र यो घटनाको म प्रतक्ष पिडिट भएकोहुनाले मैले पनि यस घटना बारे केही बोल्नै पर्ने देखेको छु ।
हिजोको कार्यक्रममा दुबाइ बाट लगिएको बसको म coordinator थिएँ । कार्यक्रम भब्यरूपमा सम्पन्न पश्चात हामी फर्किने तयरीमा थियाै । सबै साथिहरू गाडी भित्र प्रवेश नगरि सकेको हुनाले केही साथिहरूलार्इ पर्खिने क्रममा, गाडी भित्र बसिरहेको ध्यान रार्इ माथी एक्कासी हातपात बाहिर झ्याल बाट भयो । म पनि गाडी भित्रै बसिरहेको अवस्थामा एक जना भाइले गाडी भित्र नै प्रवेश गर्ने कोसिस गर्दा त्यो भाइलार्इ हामीले सम्झाउँदै बाहिर निकाल्ने काम भयो । मैले गाडी माथि क्षति नहोस भन्ने हिसाबमा कुरा राख्दै गर्दा पछाडी बाट कसैले ड्याम्मै हान्यो । म धलिसके पछि के भयो उती याद भएन । र पछि साथिहरूले उठाइ सके पछि थाहा भयो ती साथिहरूले ध्यान दाइको पनि खप्पर फुटाइ दिउको रहे छ । म धल्डा गाडिको चक्काको रिङमाथि बजारिएको हुनाले मेरो टाउको को पछाडी भागमा निक्कै ठुलो चोट परेको छ ।
यति भए पछि, म पनि अावेगमा अाएँ तर कोही मान्छेहरू थिएन । र मैले दाजु डिअार र भाइ पासाङ माथि केही अभद्र बेबाहार गरेको छु । यसको लागी मैले उहाँहरू सङमा माफि चाहान्छु । सायद म माथी परेको पिडाको बदला लिन नपाउँदा मेरो अाक्रोस उहाँहरूमा पोखिएको हुनु पर्छ । जस्तो लाग्छ ।
यो घटना सम्बन्धी सरोकार राख्दै एकाद पोष्टहरू सुनियोजित भनेर सामाजिक सन्जालमा देखियो । यो घटना सुनियोजित नभएर संयोग बस हुन गएको मेरो ठम्याइ छ । यसर्थ ज जसले यसतो पोस्टहरू अपडेट गर्नु भएको छ सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दै यो घटना संयोग बस घटेको सुनियोजित घटना होइन भन्न चाहान्छु ।
युएइमा हुने कार्यक्रमहरूमा अक्सर झै झगडा हुने गरेको देखिएको छ । यस्तै झगडाको सिकार हिजो म पनि भएँ । म एक दमै निर्दोष मान्छे हो । कसै सङग कुनै गल्ती नगरी नै म यो पिडामा परेको छु । तसर्थ सम्बन्धित मान्छेलार्इ पहिचान गरि सम्पर्कमा ल्यायर क्षती पूर्तिको माग कार्यक्रम अायोजकमा राख्द छु । यदी यतिकै यो विषयलार्इ गुपचुप राख्ने हो भने यो समस्यले विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । विकृतिले अरू हाैसला पाउँ छ ।
यस घटनामा ध्यान रार्इ माथि पनि क्षती भएको छ । उहाँले काँहाँ र को को सङग ? किन ? बादविवाद गर्नु भयो ? म पुर्ण अनविज्ञ छु । यो घटनाको प्रकृति अनुसन्धान होस र दोषीमाथि कार्वाही होस भन्न चाहान्छु ।
मलार्इ हिजो देखिन अाज दिनभर कल गरेर, म्यासेज बाट र सामाजिक सन्जालमा पोस्टहरू हालेर सुभेक्ष प्रकट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण मित्रमहानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक धन्यावाद टक्रयाउँन चाहान्छु । मैले धेरै धेरै को फोन उठाउन सकिन यसको लागी माफी चाहान्छु । अहिले म रसिद हस्पिटल बाट डिस्चार्ज भएर रूममा अाराम गरिरहेको छु । दबाइ एक हप्ताको रहेको छ ।
रकम चाम्लिङ्गको फेसबुकबाट
ठाकुरको नजरमा राजेन्द्र महतो : नेता होइन ब्यापारी, स्वार्थकालागि जसलाई पनि सिध्याउने
यसकारण फोरम-राजपाको एकता आबश्यक छ, नेताहरुले मेरो गुरुको बार्है टक्का छाड्नुपर्ने
एक प्लेट मटन र एक पेग व्हिस्कीमा बिक्ने हामी जनता मख्ख पर्छौँ – खगेन्द्र सङ्रौला